Biography Sumishevskogo uJaroslav imininingwane yokuphila siqu
izwi Live, umculo bukhoma Kuhlale kumnandi ukulalela. Futhi abalandeli nje ukusebenza enjalo kuyoba nabaningi. Ezweni lethu, ikakhulukazi ezindaweni ezicezile, eziningi ithalente alibonwa. Kwezinye emzaneni rundown kungenziwa wezwa izwi elihle kangaka ukuthi kuyayikhinyabeza yimuphi abadlali ethandwa esiteji wesimanje. Kukho konke ukuphila kanye biography Sumishevskogo Yaroslav nje eyakhelwe ekutholeni amathalenta ezinjalo abantu. Wakhe ekudalweni - engokoqobo TV iphrojekthi "Yabantu Mahora", lapho iqhaza abantu abavamile kakhulu, ngokuvamile ukucula in imigoqo kanye zokudlela.
Biography Sumishevskogo Yaroslav
Yaroslav wazalwa ngo-Sakhalin Okthoba 18, 1983, emkhayeni elula yokusebenza-class. Okudingekayo ukuze nokuthuthukisa amathalente akhe omculo avele sibonga abazali. Uyise, wokumba oqeqeshiwe futhi ubizo umculi, ayethanda ukuhlabelela. Yena njalo wakhuluma House wendawo of Culture. INdodana cishe wakhula isakhasa umoya zomculo. Ithonya labazali awuphasiswa ngeze. Yaroslav ngaqala ukuya ukuprakthiza amakhonsathi noyise, bese wathatha vocals. Ngo-1997, yena lolungenamaphutsa iziqu umculo esikoleni edolobheni lakubo ku Sakhalin. nabafundisi abangomakad 'ebona ngokushesha kula umfundi wakhe ithalenta enkulu futhi ebikezela ukuthi ikusasa yimpumelelo ukuze oculayo futhi Accordionist. Futhi babengenzi phutha. Biography Sumishevskogo Yaroslav - isiqinisekiso ecacile.
Ngemva kwesikole, nsizwa wanquma ukwenza i-career yomculo. Wabhalisa School of Arts Sakhalin. Esifundweni uJaroslav nengxenye eziningi umculo imincintiswano, njalo baba abawinile. Kakade kuleyo minyaka insizwa kuchazwe umbuthano wakhe of abayithandayo. Ngesikhathi esifanayo, uyise umculi sika kudala iqembu vocal "Waterline", ezazihlanganisa abantu abathathu: yena Yaroslav, umfowabo umngane Valeri Dmitry Garanin. Le mibuthano kuqala enkundleni iye yafeza indima juqu ngokukhetha Sumishevskim umsebenzi esikhathini esizayo. Yena nakanjani wanquma ukuxhumanisa ikusasa labo ngomculo futhi ngenye kule kuphumelele.
Qala umsebenzi pop
Ngo-2009 uJaroslav Sumishevsky, biography, ogama umndeni kukhona isihloko lesi sihloko - kakade iziqu eMoscow University of Culture and Arts. Isikhathi esithile eyingoduso kuphela ukucula, ukukhuluma emaphathini yenkampani. Khona-ke wanquma azinikele ucinge ithalente phakathi kwabantu. Ngakho kwaba khona ngokoqobo TV iphrojekthi "Yabantu Mahora", okuyinto nsuku zonke is kuyanda. Ukuze inhlangano yephrojekthi uJaroslav isinyathelo Esekelwa vocals Sergei Zverev futhi wahlabelela Duet kanye edume Aleksandrom Kuzminym. Lokhu akusoze kwalibaleka esesizile umculi esikhathini esizayo ukuthandwa.
Umqondo ukubheka ngamathalenta zomculo phakathi kwabantu abavamile weza Yaroslav engqondweni ngemva kokuphothula eMoscow University. Wathola kalula nomqondo ofanayo abantu futhi udale iphrojekthi ukuthi kakade unqobile ibutho eziningi abalandeli. UJaroslav Sumishevsky iya amaqembu kanye nemigoqo nasezindaweni ezizungeze eMoscow, ukusebenza video of abaculi abanethalente kanye ongenalwazi engaziwa kusiteshi kwabo ku-YouTube.
Amavidiyo wakhe bathola izigidi ukubukwa, ngoba Yaroslav kungenzeka ukuthola abantu abanamakhono ngempela ohlale ukucula bukhoma. Lona inzuzo enkulu ye-project "Yabantu Mahora." Kuyiwe inhloko-dolobha Yaroslav uhlale ehamba Alain Vedenina umculi engengaphansi abanamakhono ngezwi elihle. Uma udala iphrojekthi Yiqiniso, zikhona izinkinga eziningi (ukuthola umkhiqizi, abaxhasi), kodwa manje sibona ukuthi yonke into ihamba kahle. Phakathi iphrojekthi zokugcina sekuyinto ethandwa kakhulu iminyaka emithathu.
Alain Vedenina - umngani uzakwabo Yaroslav Sumishevskogo
UJaroslav wahlangana Alain ngesikhathi esilandelayo "Yabantu Mahora", lapho umculi amahle abanamakhono isibe winner kumfanele. Njengoba lezi ezimbili zihlale ndawonye. Ngaphezu kwalokho ukuhamba kusesho ithalente elisha, Alena futhi uJaroslav ngokuvamile ukuhlela okubizwa ngokuthi esiza abantulayo mini-amakhonsathi emigwaqweni. Ngokuvamile emhlabeni lo mbhangqwana abanamakhono kakhulu futhi abuthele eziningi zezilaleli sibonge. Ukuqhutshwa intsha baphe abahluphekile. Ngokuphambene inzwabethi, lokhu enhle zomculo pair bophezela ubungani kuphela kanye imigomo efanayo ekuphileni.
UJaroslav Sumishevsky: Biography, unkosikazi, isithombe
ukuphila komuntu lomculi kufihlwe ngemuva ngezimpawu eziyisikhombisa. ivikela ngokucophelela ke emehlweni prying uJaroslav Sumishevsky. Biography, izithombe umndeni ngumkayo - konke nesithakazelo abalandeli mculi. Ngokuphathelene nokuba khona umkakhe, okuthile ngakho waba ulwazi ephikisana kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi umculi akathandi ukukhuluma mayelana abathandekayo babo. Kwaphela isikhathi eside inethiwekhi sinolwazi ukuthi Umlando womuntu ophilako abalulekile kuphela Sumishevskogo uJaroslav ekudaleni ngokoqobo yephrojekthi, nomndeni umlingisi odumile sasingakafiki kuluthola. abayithandayo Abaningi onikelayo wayebheka nomkakhe Alena Vedenin, ngoba ndawonye njalo isethi, bavame ukuhlabelela ingoma Duet ngokomzwelo kakhulu ngesikhathi ukusebenza okuyinto babambane ngezandla futhi sibheke nomunye othandweni ukubukeka. Empeleni, konke lokhu nje yindawo enhle. UJaroslav futhi Alena kuphela osebenza nabo. Yini kubahlanganisa ubungani luqine ngempela futhi eside.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi ngubani uJaroslav Sumishevsky: Biography, izithombe umndeni - konke okwethulwa athikili yethu. By the way, amahemuhemu athi lo umlingisi namanje kushada. Muva nje, ulwazi leaked ukuthi umndeni wadala umculi odumile kuleli engu-18 ubudala. Umkakhe - Svetlana Sumishevskaya esekela ngokugcwele umyeni wakhe kukho konke okufunayo futhi ihlinzeka emuva okuthembekile. Lo mbhangqwana nendodakazi Xenia, ngubani ilungiselela ukuba abe esikoleni iziqu. Namuhla konke ngomkhaya umculi odumile ezaziwayo. Yaroslav yena, ukukhuluma nabezindaba, yena ugwema nezindaba ezihlobene ngempilo yakhe yangasese.
iminyaka embalwa nje biography Sumishevskogo Yaroslav yaziwa abaningi abathandi bomculo hhayi kuphela e Moscow, kodwa kulo lonke elaseRussia. Izwi Lakhe zizwiwe yonke indawo. udumo umculi sika zingachazwa kalula kakhulu - ukuthi unesikhathi ithalente elihle yemvelo nokusiza abantu ukuba babonise ukuthi ikhono lazo ukwenza izingcezu kuhle owaziwa umculo. abantu Uyabazisa like uJaroslav Sumishevsky, biography, izithombe zazo eboniswe ngenhla. Abantu zingabantu ngokuthi okuyigugu. Yena sebekubeke elahla soundtrack, nke iculo ukucula kuphrojekthi bukhoma ngokuphelele.
Zippo: Biography of umculi
Coup ngesikhathi inkampani irekhodi Masterkrona MSR
Perttu Kivilaakso - cello rock band Apocalyptica
Umholi weqembu "izidumbu" Grigoryan Armen: amaqiniso kusukela biography
Biography Abadlali umncintiswano Kamenskaya Vasileva Natalya Star
Ukuqagela phezu ring ukuzibandakanya. Izinketho ethandwa kakhulu.
Ukupheka okumnandi yenkomo inyama yangaphakathi!
Uhlolojikelele software ewusizo: software ukususwa ngokuphelele izinhlelo
Tourmaline mat: izibuyekezo odokotela
Indlela ukuhlobisa ingadi ngosizo umcabango, ukuhlakanipha kanye izandla unamakhono
Thanda Kuyini lokhu umuzwa? Lokho kufana uthando
Indlela ukoma izinwele curling ngamaketanga futhi stylers
Literacy umkhankaso: kanjani ukubuyisela e-mail "Yandex"?
Yikuphi okungcono - H- noma 3G-inthanethi? Ukukhetha
Intaba Alder: incazelo kanye nezithombe